တပျမတျောနေ့ ညစာစားပှဲ သို့ တကျရောကျခဲ့ တယျလို့ပွောသူတှကေို ဗီဒီယိုနဲ့တကှ သကျသပွေလာတဲ့ ခမျြးမွမေ့ောငျခြို – Shwe Likes
သူမကိုတ ပျမတျောနေ့ ညစာစားပှဲသို့ တကျရော ကျခဲ့တယျလို့ွေ ပာသူတှကေို ဗီဒီယိုနဲ့တကှသ ကျသပွေလာတဲ့ ခမျြးမွမေ့ောငျခြို
ခမျြးမွေ့ေ မာငျခြို ကတော့ အသကျငယျငယျေ လးနဲ့ ပရိသတျ အားပေးမှုတှေ မြားစှာရရှိထားသူ တဈယောကျပါ။ Myanmar Idol ပွိုငျပှဲေ လးကနပေရိသတျ အားပေးမှုတှေ မြားစှာနဲ့အတူခု အနုပညာလောကမှာ နာမညျတဈခုနဲ့ရပျ တညျနနေိုငျတာပါ။
သူ့သီခငျြးေ လးတှကေလညျး လူငယျပရိ သတျတှေ အားပေးမှုမြားစှာရရွှိ ပီးအောငျမွငျနတောဖွဈ ပါတယျ။
ဘဝကိုလညျးေ အးဆေးစှာဖွ တျသနျးနထေိုငျသူ တဈယောကျလ ညျးဖွဈပါတယျ။ လူမှုကှနျရကျကနေ လညျး ပုံရိပျလေးေ တှတငျပေးလရှေွိ့ ပီး ပရိသတျတှေ နဲ့နီးကပျစှာရှိနေ သူတဈေ ယာကျဖွဈပါတယျ။
အောငျမွငျသူတ ဈယောကျဖွ ဈတာကွောငျ့ မနာလိုသူတဈခြို့ ရဲ့တိုကျခိုကျမှုကိုလ ညျးခံရတာဖွဈပါတယျ။ ခုမှာလညျး မနကေ့တကျလာ တဲ့ပုံ ရိပျတှနေဲ့ပတျသကျပွီးခု လိုပွောခဲ့တာပါ ။
နခေ့ငျြးညခငျြးတော့ ဆံပငျက မရှညျနိုငျဘူးထငျတာ ပဲလှနျခဲ့တဲ့ ၃ နှဈက ပုံတှပွေနျပီးတငျနကွေ တာတှလေို့ ပွောခငျြရငျ မော ငျခြို့ကိုပဲပွော သူမြားဆှဲမထညျ့ပါနဲ့ ပွောမယျ ဆိုလဲ သခြောသိ ပီဆိုမှ ပွောကွပါမနညေ့က အဲ့ကို သှားတာတှတေ့ယျလို့ပွောတဲ့သူ ဒဲ့ရှငျးမယျ လာခဲ့ သကျသရှေိလား ?
မရှိဘူးမှတျလား အေးဆေးလေးနလေိုကျကွပါ ဘယျသူမှပြျော ရှငျမနဘေူး အပူတှေ ထပျလာမပေးနဲ့ ပီးတော့လိုကျပီးလဲ ယောငျမနနေဲ့ သူ မြားပွောတိုငျးလဲ အဟု တျကွီးထငျပီး
ငါလဲ လိုကျယောငျဦးမှမလုပျနနေဲ့ မီးတှပေကျြနတေယျ ဖုနျးအားတှေ ပါဝါဘ ဏျ့တှေ အားသှငျးကွ သူမြားကိုပွောဖို့ အားနတေယျဆိုရငျ ပုတီးလေးစိတျ အျော ငါ့မှာ အကုသိုလျတှမြေားနပေီဆိုပီး ဘုရားလေးရှိခိုးကွဦး ဆိုပွီးရှငျးပွခဲ့တာပါ။ Credit;Cele Thadin
သူမကိုတ ပ်မတော်နေ့ ညစာစားပွဲသို့ တက်ရော က်ခဲ့တယ်လို့ြေ ပာသူတွေကို ဗီဒီယိုနဲ့တကွသ က်သေပြလာတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို
ချမ်းမြေ့ေ မာင်ချို ကတော့ အသက်ငယ်ငယ်ေ လးနဲ့ ပရိသတ် အားပေးမှုတွေ များစွာရရှိထားသူ တစ်ယောက်ပါ။ Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲေ လးကနေပရိသတ် အားပေးမှုတွေ များစွာနဲ့အတူခု အနုပညာလောကမှာ နာမည်တစ်ခုနဲ့ရပ် တည်နေနိုင်တာပါ။
သူ့သီချင်းေ လးတွေကလည်း လူငယ်ပရိ သတ်တွေ အားပေးမှုများစွာရရြှိ ပီးအောင်မြင်နေတာဖြစ် ပါတယ်။
ဘဝကိုလည်းေ အးဆေးစွာဖြ တ်သန်းနေထိုင်သူ တစ်ယောက်လ ည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်ကနေ လည်း ပုံရိပ်လေးေ တွတင်ပေးလေ့ရြှိ ပီး ပရိသတ်တွေ နဲ့နီးကပ်စွာရှိနေ သူတစ်ေ ယာက်ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်သူတ စ်ယောက်ဖြ စ်တာကြောင့် မနာလိုသူတစ်ချို့ ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလ ည်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ ခုမှာလည်း မနေ့ကတက်လာ တဲ့ပုံ ရိပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခု လိုပြောခဲ့တာပါ ။
နေ့ချင်းညချင်းတော့ ဆံပင်က မရှည်နိုင်ဘူးထင်တာ ပဲလွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်က ပုံတွေပြန်ပီးတင်နေကြ တာတွေ့လို့ ပြောချင်ရင် မော င်ချို့ကိုပဲပြော သူများဆွဲမထည့်ပါနဲ့ ပြောမယ် ဆိုလဲ သေချာသိ ပီဆိုမှ ပြောကြပါမနေ့ညက အဲ့ကို သွားတာတွေ့တယ်လို့ပြောတဲ့သူ ဒဲ့ရှင်းမယ် လာခဲ့ သက်သေရှိလား ?
မရှိဘူးမှတ်လား အေးဆေးလေးနေလိုက်ကြပါ ဘယ်သူမှပျော် ရွှင်မနေဘူး အပူတွေ ထပ်လာမပေးနဲ့ ပီးတော့လိုက်ပီးလဲ ယောင်မနေနဲ့ သူ များပြောတိုင်းလဲ အဟု တ်ကြီးထင်ပီး
ငါလဲ လိုက်ယောင်ဦးမှမလုပ်နေနဲ့ မီးတွေပျက်နေတယ် ဖုန်းအားတွေ ပါဝါဘ ဏ့်တွေ အားသွင်းကြ သူများကိုပြောဖို့ အားနေတယ်ဆိုရင် ပုတီးလေးစိတ် အော် ငါ့မှာ အကုသိုလ်တွေများနေပီဆိုပီး ဘုရားလေးရှိခိုးကြဦး ဆိုပြီးရှင်းပြခဲ့တာပါ။ Credit;Cele Thadin